नेपाली बालसाहित्यको इतिहास
लिखित बालसाहित्यको इतिहास पढ्न र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
हाम्रा बालबालिकाहरू र बालसाहित्य
नेपाली बालपत्रिकाको बालसाहित्यमा योगदान
लेखक जीवेन्द्रदेव गिरी
नेपाली बालसाहित्यको सय वर्ष
प्रकाशकः नेपाल बालसाहित्य समाज मितिः २०६४ साउन
सम्पादकः भिक्टर प्रधान संयोजकः जनकप्रसाद हुमागाईँ
पुस्तकमा वि.सं‌‌. १९५८ देखि २०५८ सम्मको बालसाहित्यको इतिहास समेटिएको छ ।
नेपाली बालसाहित्यको विकासमा लागेका संघ, संस्थाहरूको चिनारी
बालसाहित्यको विकासका लागि भएका गतिविधि
नेपाल बालसाहित्य समाजको बारेमा धेरै कुरा जान्न
बालसाहित्य प्रवर्द्धन केन्द्र (बाल संसार)
बालबालिकामा पढने बानी विकास गर्ने लक्ष लिएर यो केन्द्रको स्थापना भएको हो । सुरुमा यसलाई युनिसेफले दुई वर्षका लागि सहयोग गरेको थियो ।
नेपालभित्र प्रकाशित बालपुस्तक तथा भारतमा नेपाली भाषामा प्रकाशित बालपुस्तकहरू संकलन गर्नु,
संलित पुस्तकहरूको मूल्यांकन गर्नु,
बालसंसारको स्तर सुहाउँदा पुस्तकहरू पुनर्मुद्रण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु,
बालबालकिकाका लागि मौलिक तथा अनुदित कृति सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नु, तथा
बाल साहित्यको विक्री वितरण गर्नु ।
बालसंसारले राम्ररी छानिएका विभिन्न उमेर समूह र रुचिका किताब प्रकाशित गर्छ । अहिलेसम्म यसले पन्ध्र वटा पुस्तक प्रकाशित गरिसकेको छ । यसले बालसाहित्यको सूचिपत्र (क्याटलग) पनि प्रकाशित गरेको छ । साथै बजारमा नपाइने पुस्तकहरू पनि छाप्ने काम गरिरहको छ ।
बालसंसारको एउटा गतिलो काम देशका विभिन्न भागमा बालपुस्तक प्रदर्शनी हो । नेपालमा यो नौलो काम हो । यसलाई बालबालिका र अभिभावकहरूले पनि निक्कै रुचाएका छन् । यस्ता पुस्तक प्रदर्शनीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा १० ठाउँमा र बाहिर २० वटा शहरमा २४ ठाउँमा आयोजना भइसकेका छन् । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दा पुस्तक प्रदर्शनी स्थगित छ ।
विषयगत पुस्तक सूची (बिब्लियोग्राफी)
बालसंसारले पाएसम्मका नेपाली बालसाहित्य संकलन गरेर विशेषज्ञहरूको समूहद्वारा तिनको मूल्यांकन गराएको छ र आकर्षक, रंगीन बिब्लियोग्राफी तयार पारेको छ । यो मेसोमा ३४६ थान किताब संकलन गरिएका थिए र तीमध्ये २५० पुस्तकको मूल्यांकन गराइएको थियो । २५० मध्ये सबैभन्दा राम्रा १०० थान पुस्तक क्याटलगका लागि छानिएका थिए । बिब्लियोग्राफीमा परेका पुस्तकहरू बालसंसारबाट विक्री वितरण गरिन्छ ।
विक्री वितरण काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित छैन । बालसंसारले उपत्यकाबाहिर बाल साहित्यको विक्रीवितरणका लागि २० वटा एजेन्टहरूको संजाल बनाएको छ । आफ्नै प्रकाशनबाहेक पनि बालसंसारमा ३०० भन्दा धेरै पुस्तकहरू किन्न पाइन्छ । पुस्तककालागि फोनबाट अनुरोध गर्न पनि सकिन्छ । बालसंसारले विभिन्न उमेरका बालबालिकालाई उपहार दिनका लागि पुस्तकको प्याकेट पनि बनाएर बेच्छ ।
लेखकहरूका लागि कार्यशाला
बालसंसारले बाल सहित्य लेखनमा लागेका लेखकहरू र यसमा गहिरो रुचि भएर सक्रियतासाथ लाग्न चाहनेहरूका लागि लेखन कार्यशालाको आयोजना गर्छ । केही कार्यशालाहरू विश्व बालसाहित्यलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने बारेमा केन्द्रित थिए । बालसंसारले यो कामलाई निरन्तरता दिने प्रयाश गर्दैछ ।
बालसंसारबारे बढी जानकारी यहाँबाट पाउनसकिन्छः
बालसंसार, हिमाल एसोसिएसन, पाटनढोका, पोस्टबक्स १६६, ललितपुर, नेपाल ।
फोनः ०१ ५५४२५४४, ५५४८१४२
फ्याक्सः ०१ ५५४११९६
इमेल : balsansar@himalassociation.org
वेबसाइट : http://www.himalassociation.org/balsansar/
नेपालको बालसाहित्यमा बालकोसेली प्रकाशनले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । यसले बीस वर्षभन्दा अघिदेखि बालबालिकाको हित र रुचिअनुसार बालपत्रिका नेपालीमा बालकोसेली र नेपाल भाषामा मचाक्यव बालबगैँचा प्रकाशित गर्दै आएको छ । साथै यसले बालबालिकाका लागि कथा, कविता, उपन्यास, निवन्ध, विश्वसाहित्यबाट नेपलीमा अनुवाद गरी धेरै पुस्तक प्रकाशित गरिसकेको छ ।
बालकोसेली प्रकाशनका उल्लेखनीय बाल सामग्रीहरू
बालकोसेली दुई महिने बालपत्रिका
मचाक्यव मासिक बालपत्रिका
कथाकोसेली विश्वका उत्कृष्ट बालकथाहरूको अनुवाद गरी प्रकाशन, विभिन्न भागमा
भ्यागुता र बाछी, लोककथामा आधारित सचित्र कथा
जमुनीको छोरो, कविता संग्रह
राम्रो नराम्रो, बालगीत संग्रह
हात्ती, कविता संग्रह
कमिलाको कथा, बाल उपन्यास
अनौठो भूमिमा एलिस, उपन्यास
गुलिभरको लिलिपुट यात्रा, उपन्यास
महाभारतका कथाहरू विभिन्न भागमा
चार डाला नाक, चित्रकथा
पुतलीका कथा, कथा संग्रह
गुलाफ र सिउँडी, रुसी आधुनिक बाल दन्त्यकथा संग्रह
म के बन्नु पर्ला, रुसी बालकाव्य
भद्दा टिउरो, हान्स एन्डरसनको प्रसिद्ध कथा
रेलबाटाका केटाकेटीहरू, बेलायती चर्चित उपन्यासको संक्षिप्त संस्करण
सानी जलपरी, हान्स एन्डरसनको प्रसिद्ध कथा
स्कुल जाऔँ, बालकविता संग‍ह
हिउँकी रानी, हान्स एन्डरसनको प्रसिद्ध बालउपन्यास
मुसाका दुलाको कथा
चकमकको बट्टा र उड्ने बाकस
सानो म्याउँको कथा
सानी सानी नानी म
स्कुल जान्छु टम्, टम्, टम् !
साथै अन्य पुस्तकहरू
झोछेँ, काठमाडौँ २३, पोबनं ११३२२
रूम टु रिड
जीवन समृद्ध बनाउने र मानिसको जीवनलाई डोर्याउने साँचो शिक्षा नै हो भन्ने विश्वासमा रुम टु रिड संस्थाको स्थापना गरिएको हो । हरेक बच्चालाई जीवनभरका लागि काम लाग्ने शिक्षा दिनु यसको लक्ष्य हो । गरिबीको चक्र तोडनका लागि यो नभई नहुने सर्त हो भन्ने यसको विश्वास छ ।
शिक्षाको वरदान उपलब्ध गराउनका लागि एक पटकमा एउटा गाउँ, एक पटकमा एउटा स्कुल, एक पटकमा एक जना बालक/बालिका गर्दै रुम टु रिड कम्बोडिया, भारत, लाओस, नेपाल, श्रीलंका र भियतनामसम्म पुग्दैछ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने बालबालिकाको जीवनमा प्रारम्भिक अवस्थादेखि सघाउन र उनीहरूलाई शिक्षा तथा साक्षरताको आजीवन उपहार उपलब्ध गराउन रुम टु रिडले चार प्रकारका उपाय अपनाएको छ ।
१ समुदायको साझेदारीमा विद्यालय भवन बनाउनु,
२ पुस्तकालय स्थापना गर्नु र तिनलाई उपहार वा दानमा प्राप्त अंग्रेजी भाषाका पुस्तक र रुम टु रिडले प्रकाशित गरेका स्थानीय भाषाका पुस्तकले भर्नु,
३ रोजगारीका लागि दक्षता बढाउन कम्प्युटर र भाषा तालिम कार्यशाला स्थापना गर्नु,
४ उपेक्षित वा पाखापरेका बालिकाहरूका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु ।
रुम टु रिडको कार्यालय नेपालमा पनि छ । यसले नेपाली बालबालिकाका लागि सबै पृष्ठ रंगिन भएको आकर्षक पुस्तक प्रकाशित गरिरहेको छ ।
रुम टु रिडबारे बढी जानकारी यहाँबाट पाउनसकिन्छः
रुम टु रिड, पोस्टबक्स ५८४८, ललितपुर, नेपाल ।
फोनः ०१ ५५५३९८७
फ्याक्सः ०१ ५५५३९८३
इमेल : nepal@roomtoread.org , info@roomtoread.org .
वेबसाइट : http://www.roomtoread.org